Nin Ruush ah oo lagu eedeeyay inuu qalanayay Gabadh yar oo ka hadlay eedaynta loo jeediyay | Somaliland.Org
Nin Ruush ah oo lagu eedeeyay inuu qalanayay Gabadh yar oo ka hadlay eedaynta loo jeediyay
February 26, 2010	Hargeysa (Somaliland.Org)- Nin u dhashay dalka Ruushka oo lagu eedeeyey inuu gabadh yar ka soo xaday magaalada Qardho ee Maamul-goboleedka Puntland, haddana ku sugan caasimadda Somaliland ee Hargeysa, ayaa markii u horraysay faahfaahin ka bixiyey xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo gabadha yar iyo waxa ka jira inuu qabo cudurka halista ah ee Juudaanka, isla markaana ka ganacsado xubnaha jidhka bani’aadamka.
Ninkan Ruushka ah oo magaciisa asalka ah yahay Mandana Kumara, balse markii uu dhowaan islaamay Maxamed Ismaaciil Kumara booliska Somaliland sheegeen inay gacanta ku hayaan oo uu xidhan yahay, balse isagoo xor ah ku nool guri ku yaal xaafadda Jigjiga-yar ee magaalada Hargeysa, ayaa weriyeyaal ka tirsan Jamhuuriya oo booqdeen shalay guriga uu deggan yahay oo ku dhow hudheelka Maansoor, waxa uu uga wargeyska xog-warran gaar ah ka siiyey eedaymaha culus ee loo jeediyey, xidhiidhka ka dhexeeyey gabadha yar ee reer Qardho iyo guud ahaan xaaladdiisa.
Mr. Kumara oo hore muddo shan sannadood ah ugu noolaa magaalada Qardho ee Soomaaliya, laakiin dhowaan u soo wareegay dhinaca Somaliland, ayaa la sheegay inuu yahay khabiir ku takhasusay macdan-baadhista.
Mr. Kumara waxa uu sheegay in haba yaraatee aannu wax xidhiidh ah oo hore la lahayn gabadha yar ee lagu eedaynayo inuu soo xaday oo magaceeda la yidhaa Caasha Muxumed Xasan, isla markaana laanta baadhista dembiyada CID-da ee ciidanka booliska Somaliland oo dhowaan xidhay xorriyaddiisa u soo celiyeen, kadib markii ay wax dembi ah ku waayeen, ku waayeen.
Waxa kaloo ninkan dhalashadiisu Ruushka tahay uu wax lala yaabo ku sifeeyey hadal Taliye-ku-xigeenka Ciidanka Bilayska Somaliland ka sheegay laanta afka Soomaaliga Idaacadda BBC-da maalintii Salaasada, kuna sheegay in ninkaasi xidhan yahay, arrintaas oo uu ku tilmaamay mid aan waxba ka jirin, si xor ahna u jooga guriga uu ka deggan yahay Hargeysa.
Sidoo kale, Mr. Maxamed Ismaaciil Kumara waxa uu beeniyey warar sheegaya inuu qabo cudurka halista ah ee juudaanka oo toddobaadkan lagu faafiyey wargeyska Haatuf, isagoo xusay inuu yahay muslim qaatay diinta suubban ee islaamka, sidaa darteedna aanay fiicnayn in laga faafiyo warar aan sal iyo raad toona lahayn oo karaamadiisa iyo sharaftiisa lagu waxyeellaynayo, sumcaddana lagaga dilayo.
Mr. Maxamed Ismaaciil Kumara oo ay qoyskiisii iyo qaraabadiisiiba kala xidhiidh furteen markii uu qaatay diinta islaamka muddo hadda laga joogo ilaa afar sannadood oo markii weriyeyaashu gurigiisa kula kulmeen sijaayadda salaaddu u fidsanayd, kuna guda jiray cibaado iyo digriga Illaahay, waxa uu xog-warrankiisa xaaladaha la soo dersay intii uu Somaliland ku sugnaa ku bilaabay sidan:
“Anigu waxaan magaalada Qardho ku noolaa muddo shan sannadood ah. Gabadhan yar ee la igu eedaynayo anigaa muddadaas caawinayey qoyskooda oo ah danyar, dadka oo dhanna way ka warqabeen in aan caawiyo. Markaan u sheegay inaan Hargeysa tegayo way oyday, waxayna tidhi; ‘haddaad naga tagto yaa na caawinaya?’ Waxaan u sheegay in markaan Hargeysa tago aan kaxayn doono inanta yar oo ay i sugto.
Markii aan Hargeysa imi ayaan nin u diray si uu u soo kaxeeyo gabadha. Waxaan siiyey lacag iyo telefoonkii laga helo lahaa, nasiib-darro inantii yarayd ayey ayeeydeed xannuunsatay oo waxay igu tidhi, ‘ayeeyaa xannuunanaysa ee maalin kale ayaan soo bixi doonaa.’ Ninkii aan lacagta siiyey ee ku idhi inanta soo kaxee ayaan u tegay oo ku idhi gabadhii way baaqatay ee lacagtii aan kuu dhiibay ii so celi, balse wuxuu igu yidhi; ‘Hadday inantu iman waydo lacagtaadii way kaa khasaaraysaa oo laguuma celinayo.’ Waxaan ku idhi, haddaba qayb isoo celi qaybta kalena qaado. Wuu idiiday oo wuxu si badheedh ah iigu yidhi; ‘hal dollar laguuma celinayo ee iska tag.’ Waxaan la hadlay Qardho, waxaanan ku idhi inanta hadda wax shaqo ah uma hayo, lacagna ma hayo ee fadlan isa soo dabbar oo Hargeysa kaalay. Waxay igu tidhi, ‘ma iman karayo oo bil ka bacdi ayaan iman doonaa.’ Ilaa muddadaas wax xidhiidh ah lamaan sameyn inanta yar.
Maalin kale ayey ila soo xidhiidhay waxayna tidhi; ‘Walaashay oo iga weyn ayaan kuu soo diraaaaye oo aan da’deeda ku qiyaasay ilaa 23 jir.’ Waxaan ku idhi, maya, iska jog waxba ha iman ku dheh. Way iga diiday. Saaxiibbaday oo reer Somaliland ah ayaan arrintii u sheegay; waa caadi bay igu yidhaahdeen ee ha timaaddo hadday doonayso inay kuu shaqayso oo markay maalintii guriga ka shaqayso habeenkiina ha rawaxdo.
Dhibaatadu waxay ka dhacday anigu ma garanayo gabadha la ii soo diray. Ninkii soo qaaday ee Qardho ka keenay ayaa ila soo hadlay oo igu yidhi; ‘inan ku doonaysa ayaan kuu wadaa.’ Waxaan ku idhi anigu gabadha aad sheegayso ma garanayo ee bal saaxiibbaday ayaan soo kaxaysanayaaye i sug. Wuxuu yidhi; ‘Maya ee kelidaa kaalay cidna ha soo kaxaysane.’ Waan tegay; markii aan gabadha wejigeedii arkay waxaan ku idhi, anigu ma garanayo oo kama mid ah qoyskii aan Qardho ku aqaanay. Markaa kadib ayey boolis iigu yeedheen waa la i xidhay, waxaanan xarunta CID-da ku xidhnaa muddo siddeed maalmood ah.
Su’aalo badan ayaa la weydiiyey oo maxaa gabadhan idinka dhexeeya ayaa la igu yidhi. Wax xidhiidh ah lama lihi ayaan ku idhi, waxaanan u sheegay in aan ahay qof mulsim ah, gabadhan yarina tahay muslimad, isla markaana aannu wax xidhiidh ah naga dhexeyn oo aanan garaynba. Ma waxaad doonaysaa inaad guursato, mise waad qabtaa? ayey igu yidhaahdeen. Maya baan ku idhi. Waxaan la xidhiidhsiiyey booliska dadkii wanaagsanaa ee aannu isnaqaanay iyo maamulka magaalada Qardho, waxayna u sheegeen in aanan dambiile ahayn, sidaas ayaana la igu sii daayey, wax dembi ahna waa la igu waayey oo ku saabsan inanta yar ee la igu eedeeyey.”
Mr. Maxamed Ismaaciil Kumara oo ka hadlayey sida uu arko hadalkii taliye-ku-xigeenka booliska Somaliland ka baahiyey idaacadda BBC-da Salaasadii oo uu ku sheegay inaad xidhan tahay, waxa uu ku jawaabay; “Horta anigu ma akhriyo afsoomaaliga, laakiin waxa la igu yidhi wargeys ayaa wax kaa qoray oo kugu eedeeyey inaad carruurta yaryar ka ganacsato, runtiina arrintaas waxba kama jiraan oo waa been cad. Waxa kaloo BBC-du shalay [Salaasadii] sheegtay inaan xidhanahay, arrintaasina waa been oo xorriyad baan ku joogaa gurigayga oo u dhow hudheelka Maansoor ee magaalada Hargeysa, arrintaasina waa been oo siday u dhacdayna ma garanayo.”
Waxa kale oo ninkan Ruushka ah la weydiiyey su’aal ahayd; “Waxa lagagu eedeeyey inaad qabto cudurka Juudaanka iyo inaad ka ganacsato carruurta yaryar oo kala baxdo xubnahaha jidhkooda sida; kelyaha, sambabada, beerka iyo xubnaha kale ee muhiimka ah, arrintaas maxaad ka leedahay?” Isaga oo su’aashaa ka jawaabayey waxa uu yidhi; “Bismillaahi Raxmaani Raxiim…. anigu waxaan ahay qof muslim ah, intii aan islaamayna wax balwad ah maan yeelan, sigaarka ma cabbo, jaadka ma cuno, wax balwad ah oo kalena ma lihi. Anigu waxaan ahay nin muslim ah oo Ruush ah, dadka Ruushkuna waxay cunaan hilibka lo’da iyo kalluunka ee dadka ma cunaan. Wallaahi Billaahi wax shaqo ah kuma lihi eedaha la i soo jeediyey, dadkana ma cuno, kamana ganacsado xubnaha bani’aadamka ee waxaas la sheegayo oo dhan waa been aan sal iyo raad toona lahayn, waanna daacayad raqiis ah oo dad xumi faafiyeen.
Wargeyska waxaas qoray yaa u sheegay, warkaas xagguu ka soo xigtay, muxuu caddayn hayaa, yaa u sheegay inaan dadka cuno oo aan iibiyo keliyaha iyo xubnaha bani’aadamaka, halkeen ku iibiyaa? Dadka iga iibsada iyo waxaas oo dhan caddayntooda ayaa la rabaa. Anigu waxaan ahay qof bani’aadam ah oo muslim ah oo xayawaan ma ihi. Yaa macluumaadkaas qaldan siiyey wargeyska, xagguu ka keenay? Wa in CID-du caddayntiisa weydiisaa. Adduunyada wargeyska waxan oo kale qora ee qofka ka dila sharaftiisa maxkamad ayaa la saaraa, laakiin anigu si fiican uma aqaan dhaqanka dadka Soomaalida iyo waxay ka yeelaan cidda sharafta laga dilo… waxaan hadda doonayaa inaan helo cidda macluumaadkaas beenta ah ee sharaftayda waxyeellaynaysa gudbisay, waayo waxaan ahay qof muslim ah oo aan wax dembi ah lahayn,” ayuu yidhi ninka Ruushka ah.
Xigasho: Wargeysk Jamhuuriya
Hargeysa (Somaliland.Org)- Nin u dhashay dalka Ruushka oo lagu eedeeyey inuu gabadh yar ka soo xaday magaalada Qardho ee Maamul-goboleedka Puntland, haddana ku sugan caasimadda Somaliland ee Hargeysa, ayaa markii u horraysay faahfaahin ka bixiyey xidhiidhka ka dhexeeya isaga iyo gabadha yar iyo waxa ka jira inuu qabo cudurka halista ah ee Juudaanka, isla markaana ka ganacsado xubnaha jidhka bani’aadamka.
Previous PostSoo Dhaweyntii Faysal Cali Waraabe,Hargeysa Part 1 of 2Next PostQaban-qaabada Caleemo-saarka Ugaaska Beesha Ciisaha ee maalinta Isniinta oo ka socota Saylac	Blog